China Ninja Agụmakwụkwọ emeputa na ụlọ ọrụ | Ngwongwo Egwuregwu Haiber
Agụmakwụkwọ Ninja bụ usoro ihe mgbochi na - agbagha ma melite ike, ntachi obi, nhazi, ike na nguzozi. Ndị na-egwu egwuregwu kwesịrị ikpochapụ ọtụtụ nkebi dị ka Ninja tupu ha eruo ebe njedebe. Dabere na ubi dị ka achọrọ, akụrụngwa akụrụngwa nwere ike ịhọrọ ma dakọtara na ya karịa karịa ọkwa 30. Agụmakwụkwọ Ninja bụ ezigbo nhọrọ maka ihe eji aka mbinye aka na egwuruegwu n'ime ime ụlọ.
Onu ogugu uzo na ihe mgbochi obula di na Ninja Warrior dabere na ikike nke onye ahia ya choro tinyere onu ogugu ebe aga ewuliri ya. Anyị na-enye ihe karịrị ihe mgbochi 45 nwere ọkwa ihe isi ike dị iche iche nwere ike ịgbagha ndị mmadụ na ọkwa ọ bụla. Usoro Ninja bụ ezigbo mma maka ogige trampoline, FECs, ebe egwuregwu, ebe a na-azụ ọzụzụ ma ọ bụ na-arị gyms.
Agụmakwụkwọ Ninja bụ usoro ihe mgbochi na - agbagha ma melite ike, ntachi obi, nhazi, ike na nguzozi. Usoro Ninja na-enye ndị ọbịa ohere ịzụ, na-asọrịta mpi ma kwadoo na ebe ntụrụndụ na ebe nchekwa. Onu ogugu uzo na ihe isi ike na Usoro Ninja obula dabere na ikike onye oru a choro tinyere nha ebe a gha agha iru ya. Anyị na-enye ihe karịrị ihe mgbochi 45 nwere ọkwa ihe isi ike dị iche iche nwere ike ịgbagha ndị mmadụ na ọkwa ọ bụla. Usoro Ninja bụ ezigbo mma maka ogige trampoline, FECs, ebe egwuregwu, ebe a na-azụ ọzụzụ ma ọ bụ na-arị gyms.
1. amfụfụ Mat
• ịdị elu: 15-30 cm (5.9-11.8 na)
• Ọ dị mfe ihicha ma na-elekọta ya
• Nhọrọ ọtụtụ agba
2. Ogbo mgbakwunye
• ịdị elu: 30 cm (11.8 na)
• Agbakwunyere echekwa
3. Platform, padding column
A na-eji sọks dị n’agbata ihe mgbochi na ogwe osisi dị iche iche iji belata ihe mmerụ ahụ.
Enwere ike ịwụnye ụgbụ nchekwa n'akụkụ nke usoro maka nchekwa dị elu ma ana-akwadoro maka ọmụmụ dị elu. Ha bara uru karịchaa mgbe usoro mmụta ahụ dị n'akụkụ akụkụ ndị ọzọ.
Agụmakwụkwọ Ninja bụ usoro ihe mgbochi na - agbagha ma melite ike, ntachi obi, nhazi, ike na nguzozi. Usoro Ninja na-enye ndị ọbịa ohere ịzụ, na-asọrịta mpi ma kwadoo na ebe ntụrụndụ na ebe nchekwa.
Onu ogugu uzo na ihe isi ike na Usoro Ninja obula dabere na ikike onye oru a choro tinyere nha ebe a gha agha iru ya. Anyị na-enye ihe karịrị ihe mgbochi 45 nwere ọkwa ihe isi ike dị iche iche nwere ike ịgbagha ndị mmadụ na ọkwa ọ bụla. Usoro Ninja bụ ezigbo mma maka ogige trampoline, FECs, ebe egwuregwu, ebe a na-azụ ọzụzụ ma ọ bụ na-arị gyms.
Nke gara aga: Ogige Trampoline
Osote: Nnukwu ọdọ mmiri Ọdọ mmiri